‘…नभए सरकारले सम्हाल्न नसक्ने आन्दोलन हुन्छ’ « Janata Samachar
#चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ
‘…नभए सरकारले सम्हाल्न नसक्ने आन्दोलन हुन्छ’
प्रकाशित मिति : 14 June, 2019 6:16 pm
जनकपुरधाम । जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दासले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको गुठी विधेयक फिर्ता नलिए सम्हाल्न नसक्ने आन्दोलन हुने चेतावनी दिनुभएको छ । विधेयक फिर्ता नलिए आफूहरु कडा आन्दोलनमा जाने उहाँको चेतावनी छ ।
शुक्रबार जानकी मन्दिरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकी मन्दिरका साधुमहन्थहरुले शुरुमा समिति बनाएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन् । त्यसपछि पनि माग पूरा नभए कडा आन्दोलनमा जाने बताएका छन् ।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको गुठी विधेयकले साधुसन्तलाई देशबाट भगाउने उद्देश्यले आएको अरोप लगाउँदै उहाँले साधुसन्तलाई देशमा बस्ने अधिकार छैन भने लेखेर दिन चुनौती दिनुभयो । अहिलेकै विधेयक पारित भए जनकपुरका अधिकांश मन्दिर र मूर्तिको संरक्षण हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले ल्याउन लागेको गुठी विधेयकमा साधु सन्तहरुको अस्तित्वलाई समाप्त गर्दै हिन्दु धर्मको नास गर्ने अभिप्रायले ल्याएको उनीहरुको आरोप छ । गुठी विधेयकमा सरकारलेसाधु महात्मालाई कुनै स्थान नदिएको नराखेको उनीहरुले आरोप लगाए ।
मन्त्रिमण्डल हेरफेर : यी हुन् सम्भावित मन्त्री
सचिवालय बैठकमा सभामुख र मन्त्रीको प्रतावित सूचीबारे छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ ।
डाक्टरको कोठा तोडफोड गर्ने युवाको रिहाइ माग्दै प्रदर्शन
राजविराजमा कोठा तोडफोड गर्ने युवाको रिहाइ गर्न प्रदर्शन भएकाे छ ।
होस्टेलमा बसेका विद्यार्थी घर जान खोज्दा शिक्षकले फलामको पाइपले हानेपछि…
राजविराजमा शिक्षकको कुटाइबाट विद्यार्थी घाइते भएका छन् ।
ट्रयाक्टरमा सवार मजदुरको ट्रकले किचेर मृत्यु
सिमरा उपमहानगरपालिकामा ट्रयाक्टरमा सवार मजदुरको ट्रकले किचेर मजदुरको मृत्यु भएको छ ।
बिहान ५ः०० स्टेशनआइडी÷राष्ट्रियगान ५ः०२ योग÷एरोबिक्स ५ः२५ दर्शन दिग्दर्शन ५ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ६ः०० जनता समाचार ६ः३० तिर्थ पर्यटन ६ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ७ः०० जनता…
२०७६ असोज २९ गतेको राशिफल
मेष– खुशियालीमा दिन बित्नेछ, काममा प्रगति हुनेछ । वृष– विलासितामा बढी खर्च हुनेछ, यात्रा कठीन हुनेछ । मिथुन– नयाँ कामको…
मन्त्रिमण्डल हेरफेर : यी हुन् सम्भावित…
निर्माण व्यवसायी संगठन सुदूरपश्चिम संयोजकमा धामी
नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठन सुदूरपश्चिम प्रदेशको संयोजकमा कमानसिंह धामी चयन हुनुभएको छ ।
डाक्टरको कोठा तोडफोड गर्ने युवाको रिहाइ…
होस्टेलमा बसेका विद्यार्थी घर जान खोज्दा…
आमामाथि छोरीकाे शव : किन फर्कियो तालिम प्राप्त कुकुर ?
मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुँदै, को–को बन्दैछन् मन्त्री ?
तास खालबाट कांग्रेस सभापतिसहित ८ पक्राउ
सांसद थापाकी श्रीमती भन्छिन्- केटा मान्छे साँझ पिएको बेला बोलिहाल्छन्
सी चिनफिङको भ्रमण र दक्षिणपन्थी छट्पटी
जिल्ला संयोजक : खेम बम